I-Bahamas esekwe kwiCoral Vita iphumelele iPrince William's Earthshot Prize
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeBahamas Breaking » I-Bahamas esekwe kwiCoral Vita iphumelele iPrince William's Earthshot Prize
Iindaba zeBahamas Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Xanduva • News Sustainability • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
ISebe lezoKhenketho laseBahamas, uTyalo-mali kunye nokuHamba ngenqwelomoya livuyisana neshishini laseGrand Vita eliphumelele e-Grand-Bahama ngokuphumelela ibhaso elidumileyo lePrince William kwi-Earthshot Prize e-Alexandra Palace, eLondon kule Cawa iphelileyo. Ibhaso lomhlaba elingu- £ 1 yezigidi linikezelwa yiRoyal Foundation kwabahlanu abaphumeleleyo nyaka ngamnye kwizisombululo zabo kwimiceli mngeni kwindalo esingqongileyo. Amabhaso anikezelwa ngokwamanqanaba amahlanu: "Khusela kwaye ubuyisele indalo," "Vuselela iilwandle zethu," "Ucoce umoya wethu," "Yakha ilizwe elingenaNkunkuma" kunye "nokulungisa imozulu yethu." Phakathi kwabaphumeleleyo amabhaso amahlanu okuqala, iqela laseCoral Vita lanikwa ibhaso le- $ 1 lesigidi kudidi lwe- "Hlaziya iilwandle zethu".
Inyathelo lesayensi elisekwe kwisiqithi saseGrand Bahama lifumene ukwamkelwa kwihlabathi liphela ngempembelelo yalo yokulungisa iziphumo zokufudumala kobushushu kulwandle lwehlabathi.
ICoral Vita iyakwazi ukukhula ngeekorale ukuya kumaxesha angama-50 ngokukhawuleza kunokuba ikhula kwindalo, ngelixa inyusa ukomelela ngokuchasene ne-acidifying kunye nokufudumeza ulwandle.
Eli ziko liphindwe kabini njengeziko lezemfundo yaselwandle kwaye sele lidume ngokuba ngumtsalane kubakhenkethi.
Emva kokufumana iindaba ngeBhaso lePasile elinikwe uCoral Vita, uMlawuli-Jikelele weSebe lezoKhenketho, uTyalo-mali kunye nokuHamba ngenqwelomoya uJoy Jibrilu uthe, “Njengelizwe, kusinika ikratshi elikhulu ukuba inyathelo lenzululwazi elisekwe kwisiqithi saseGrand Bahama ifumene iwonga lehlabathi ngempembelelo yayo yokulungisa ubushushu behlabathi elwandle. ”
Kwi-2018, uSam Teicher kunye noGator Halpern, abasunguli beCoral Vita, bakha ifama yekorale eGrand Bahama ukulwa nokutshintsha kwemozulu. kwiiBahamas. Eli ziko liphindwe kabini njengeziko lezemfundo yaselwandle kwaye sele lidume ngokuba ngumtsalane kubakhenkethi. Kunyaka omnye emva kokuphehlelela eli ziko, iNkanyamba uDorian yatshabalalisa isiqithi saseGrand Bahama, esomeleza isigqibo senkampani sokugcina izixhobo zethu zekorale. Usebenzisa iindlela zokuphumelela, iCoral Vita iyakwazi ukukhula ngeekorale ukuya kumaxesha angama-50 ngokukhawuleza kunokuba ikhula kwindalo, ngelixa iphakamisa ukomelela ngokuchasene ne-acidifying kunye nokufudumeza ulwandle. Ezi ndlela zenzululwazi zenzekileyo zenza ukuba iCoral Vita ibe ngumgqatswa ofanelekileyo kwiBhaso loMhlaba.
IRoyal Foundation yeDuke neDuchess yaseCambridge Earthshot Prize yaphuhliswa ngo-2021. Injongo yebhaso kukukhuthaza utshintsho kunye nokunceda ukulungisa iplanethi kule minyaka ilishumi izayo.
Unyaka ngamnye, kule minyaka ilishumi izayo, amabhaso amahlanu esisigidi esinye seepawundi nganye aza kunikezelwa kubathandi bendalo esingqongileyo, ngethemba lokubonelela ngezisombululo ezingama-50 kweyona ngxaki inkulu yokusingqongileyo ngowama-2030. ibhaso elidumileyo lehlabathi. Kwakukho abathathu abagqwesileyo kumjikelo ngamnye kula mahlanu. Bonke abalishumi elinesihlanu abagqwesileyo bokugqibela baya kuxhaswa yi-The Earthshot Prize Global Alliance, uthungelwano lwamancedo, ii-NGOs, kunye namashishini abucala kwihlabathi liphela abaza kunceda ukulinganisa izisombululo zabo.
Ngolwazi oluthe kratya kwi-Earthshot Cofa apha.